I-Semalt Expert ekukhuseleni ii-Engines zokuKhenketho Ukususela kwiNgxelo yeBlogPress
Injongo yokuqala iblogi kubantu abaninzi kukuba neendlela ezininzi ezinokuthi zenzeke. Kwabanye, kubonakala ngathi iphupha lizaliseka xa i-Google ihlawula umxholo wayo. Ngako oko, usikhumbuza umbuzo: kutheni umntu enqwenela ukuba angabikho indawo yakhe enekhompyutha nayiphi na injini yosesho ?
URoss Barber, ingcali ephezulu ye-12 (Semalt , ichaza apha izizathu zokuyeka izitshixo zokukhangela kwi-website yakho kunye neendlela zokwenza oko - tampa bay business solutions.
Xa uqala, kwaye ibhulogi isanda kutsha, kukho ithuba eliphezulu lokuba usebenza kwisayithi kwaye ushicilela umxholo ovela apho. Ukuqhubela phambili, unokwazi ukuba umxholo owubekayo awufezekanga kwaye awunqwenela abanye abantu njengokuba kunokuchaphazela kakubi ukuthembeka kwakho. Isisombululo esisodwa ongacinga ngaso kukususa isayithi ukuba ungabonakali kwiziphumo zophando zeGoogle uze udibanise izakhono zakho zokubloga, kwaye ngoku ukulungele abantu ukuba bafikelele kwiwebhusayithi yakho. Ezi zilandelayo zimbalwa iindlela zokwenza oku:
Isinyathelo 1. Khubaza ii-Injini zokuKhenketha kwi-IndexPress WordPress
Ingcamango engemva kwalokhu kukuthintela iinjinjini zokukhangela ukukhwela isayithi kwindawo yokuqala. Kukho iindlela ezimbini ongayisebenzisa:
Indlela yoku-1: Kukho uphawu olufakwe kwi-WordPress oluvimbela izitshixo zokukhangela ukukhahlela isayithi.
Vula isigaba se-Admin kwi-WordPress kwaye ukhethe "Ukufunda" kwindawo yesethingi. Kwi "injini yosesho yokubonakala," kukho ibhokisi yokutshekisha eyenza umsebenzisi ukuba "Khubaza iinjinjini zokukhangela ukususa indawo." Emva kokuba ukhangele le bhokisi, nqakraza ugcine kwaye uphume.
Indlela 2: Ukuba ukhetha indlela ehamba phambili, ukuhlela i-robots.txt yinto engcono kuwe..
Fumana i-robots.txt kwiifayili zewebhu ongafikelela kuyo ngokusebenzisa umphathi wefayili. Sebenzisa i-syntax (i-agent-agent: *, Cindezela u-Enter, kwaye ungavumeli: /), ukugcina ii-injini zokukhangela ukukhawulela isayithi.
Inyathelo 2. Ukukhusela iphasiwedi
Ii-injini zophando kunye nabakhonkco abakwazi ukufikelela kwiifayile ezikhuselweyo ngegama. Sebenzisa iindlela ezilandelayo ukudala amaphasiwedi:
Indlela yoku-1: Iinkonzo zokubamba iiprogram zikhuselekile iikhowudi ezikhuselekileyo zixhobo ezilula ukuyisebenzisa. I-Hostinger kunye neCanel baneenkqubo ezifanayo.
Ngomnye kwipaneli yokulawula yokusingatha, khangela i icon kunye nenketho yokukhusela i-directory. Xa ucofa kwiiqhosha, iwindow entsha ibonakala ngohlu lweefayile, apho ukhetha "i-public_html." Cofa kwiqhosha "khusela", uphume.
Indlela 2: Ungasebenzisa i-plugin ye-WordPress efana ne-WordFence, okanye i-Password Protect ukuphumeza iziphumo ezifanayo. Qinisekisa ukuba sele idlulile ngaphambi kokuyifaka. Emva kokufakela, yakha iphasiwedi yesayithi, kwaye yonke into iya kuhlala ikhuselekile ekukhaleni.
Isinyathelo 3. Ukususa i-Indexed Page ukusuka ku-Google
Kukho amaxesha apho iGoogle inika indawo kwisithandwa somnini. Kukho indlela yokuguqula oku, kodwa kudinga ukusetha i-Google Search Console kwindawo yokuqala. Emva kokuthatha isigqibo kwiwebhsayithi ofuna ukuba isuswe, jongela "Susa ii-URL" phantsi kwithebhu ye "Google Index". Kwibhokisi elingenanto linikeziwe, faka i-URL yesayithi kwaye nqakraza uqhubeke. Khetha ukufihla ikhefu kwiphepha uze ungenise isicelo.
Akukhathazeki ukuba zeziphi izizathu onokuzikhusela kwiinjini zokukhangela ukukhahlela kunye nokuchonga ulwazi kwiziko lakho. Amanyathelo anikezelweyo anokukunceda ukufezekisa oko. Abanye bangabanikanga iziphumo ezilungileyo kodwa bakhonze injongo enjongo.